Afrika (Af Ingiriis : Afrika; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa qaarada labaad ee ugu weyn qaaradaha aduunka kadib qaarada Aasiya dhanka baaxada iyo dhanka dadkaba. Baaxada Afrika waxay la'egtahay c. 30,244,050 km² (11,677,240 mi²) tiradaas waxaa ku jira dhamaan jasiiradaha lagu xisaabo Afrika. Afrika baaxadeeda waxay dabooshaa 20.3% baaxada dhulka oo dhan. Sida lagu xusay tirokoob caalami ah oo la sameeyay sanadkii 2013ka waxaa ku nool qaarada Afrika dad tiradooda ay dhantahay 1.3 bilyan taasi oo ah tiro u dhiganta todobo qeyboodoo qayb dadka dunida ku noolo maanta.
Badhtanka Afrika (Af Ingiriis : Central Africa; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa deegaan xudun u ah badhtamaha qaarada Afrika, taasi oo ka kooban tiro wadano ah, sida: Burundi, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Jad, Jamhuuriyada Dimuqaraadiga Kongo, iyo Ruwanda.
Waqooyiga Afrika (Af Ingiriis : North Africa; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa deegaanka ugu xiga waqooyiga dhamaan gobolada qaarada Afrika, taasi oo ka kooban ilaa "Toban" iyo "Labo"+ wadan iyo deegaano, sida: Aljeeriya, Masar, Libya, Marooko, Suudaan, Tuuniisiya, Mauritania iyo Jabuuti .
Galbeedka Afrika (Af Ingiriis : West Africa; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎; sidoo kale loo yaqaano Dadka Galbeedka Afrika People of Western Africa) waa deegaan balaadhan oo dhaca galbeedka qaarada Afrika, taasi oo leh 18 wadan kuwasi oo kala ah: Benin, Burkina Faso, the island of Cape Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, the island of Saint Helena, Senegal, Sierra Leone, Sao Tome and Principe and Togo.
↑ Names of countries Archived Juun 27, 2019 // Wayback Machine, Decret and Fantar, 1981.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrika&oldid=235520"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 May 2022, marka ee eheed 01:33.